Yenza i-Hotmail Imeyile-ihlaziyiwe nge-Windows Live ID | Iindaba zeGajethi
Yenza i-imeyile yeHotmail
Uyenza njani iakhawunti kwiHotmail?
Yenza i-imeyile kwi-Hotmail kulula kakhulu. Kodwa okoko kukhutshwe i-Windows Live ID inkqubo itshintshile kwaye abantu abaninzi abayazi indlela yokwenza, ke masenze njalo Cacisa inyathelo ngenyathelo ngendlela yokwenza i-imeyile kwi-hotmail.
1 Uyenza njani iakhawunti kwi-hotmail?
2 Iindawo zokufumana iakhawunti yakho
3 Jonga ukuba awuyiyo irobhothi
4 Uyenza njani iAkhawunti yokujonga
Uyenza njani iakhawunti kwi-hotmail?
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukwenza iakhawunti yeWindows Live ID. Ukwenza njalo kufuneka singene eli phepha.
Kuye baya kucela yonke idatha yakho yobuqu:
Kwinqaku elilandelayo uyakubuza ufuna ukuqala njani iseshoni yakho. Leyo iya kuba yi-imeyile yakho ye-hotmail kwaye iyafana naleyo uya kuyisebenzisa njengokungena kwiakhawunti yakho yeWindows Live, ke kuya kufuneka ucofe kwiqhosha «Okanye ufumane idilesi entsha ye-imeyile».
Nje ukuba ucofe apho, imenyu iboniswa ekuvumela ukuba ukhethe igama lomsebenzisi wakho (ukuba nje ayisekho) kwaye indawo apho ufuna ukuyila khona. Okwangoku ungakhetha ukwenza iakhawunti ku @ outlook.es, @ outlook.com, @ hotmail.es, @ hotmail.com okanye @ live.com
Khetha uhlobo lwesizinda oluthanda kakhulu. Ngaphambili inokuba kuphela kwi-hotmail kodwa ngoku unokuyifumana kwi-Outlook okanye ngoku ngokuBukhoma kwaye isebenza ngokufanayo.
Iindawo zokufumana iakhawunti yakho
Nje ukuba kwenziwe oku, kuhlala kuphela ukugqiba amanyathelo asebenza kuwo ukubuyisa iakhawunti yakho xa kukho nayiphi na ingxaki (iphasiwedi elahlekileyo, ukubiwa kweakhawunti, njl. Ilula kakhulu kuba kuya kufuneka ubonise kuphela:
inombolo yakho yefowuni
unayo Enye idilesi yemeyile endaweni yale. Apha ungasebenzisa enye iakhawunti yakho kwi-gmail, yahoo.es okanye umzekelo iakhawunti ye-imeyile yeyunivesithi okanye yomsebenzi
Ngokukhetha unokubeka umbuzo wokhuseleko. Nangona ngokungathandabuzekiyo lolona khetho lukhuselekileyo kuba impendulo inokwaziwa ngabantu abaninzi.
Ukugqiba ngedatha, kuya kufuneka ugcwalise ilizwe ohlala kulo kunye nekhowudi yakho yeposi.
I-Captcha yokuqinisekisa ukuba ungumntu
Jonga ukuba awuyiyo irobhothi
IMicrosoft- njengezinye iinkampani- kufuneka iqinisekise ukuba umntu obhalisela iWindows Live uyinyani kwaye ayisiyo irobhothi ebhalisa ngokuzenzekelayo. Kungenxa yoko le nto ehlala esebenzisa inkqubo yomlinganiswa ogqwethekileyo ekucela ukuba uphinde. Ngale ndlela, ngabantu kuphela abakwaziyo ukuqonda abo bantu kwaye baphinde babhale ngokuchanekileyo kwakhona.
Nje ukuba ufike apha, kuya kufuneka wamkele onke amagatya asemthethweni kwaye ucofe kwiqhosha lokuvuma kwaye sele unayo eyakho Iakhawunti entsha ye-hotmail.
Uyenza njani iAkhawunti yokujonga
Ukuba ufuna ntoni Yenza iAkhawunti yokujonga ngoku ukuba i-hotmail ayisekho, kwikhonkco esikubeke kuyo uyakufumana isikhokelo sokwenza inyathelo ngenyathelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Yenza i-imeyile yeHotmail
Ukuphononongwa kwe-iPhone 6s Plus entsha
Crunchyroll, iqonga lokubukela i-anime kuso nasiphi na isixhobo